Millet Oligopeptide Powder- Warshad Soosaara
Budada oligopeptide budada waa budada oligopeptide budada ah oo hodan ku ah amino acids kaladuwan iyo macdano laga soosaaray masago iyadoo la adeegsanayo iskudhafyo badan oo bayotechnoolajiyadeed sida heerkulka hooseeya ee enzymatic hydrolysis. Waxay leedahay ur udgoon oo aan lahayn dhadhan qadhaadh, waxaana si dhakhso ah loogu milmi karaa biyo.
Culeyska molikaliska ee budada oligopeptide budada ah wuxuu kayaryahay 1000u, oo saamiga borotikalka hydrolyzate wuxuu gaari karaa 90%, taas oo ay fududahay in jirka bini'aadamku nuugo.Waxay leedahay hanti wanaagsan antioxidant.
Qeexitaanka Budada Oligopeptide Budada
Product Name Budada budada budada ah oligopeptide
Waa maxay budada loo yaqaan 'Millet Oligopeptide'?
Waa maxay faa'iidooyinka budada Millet Oligopeptide?
Budada oligopeptide budada ah waxay leedahay saameyn muuqata immunomodulatory
Budada oligopeptide budada ah waxay leedahay saameyn faafitaan muuqda oo ku saabsan jiirka lymphocytes, taas oo muujineysa in peletide-ka loo yaqaan 'millet peptide' ay sare u qaadi karto difaaca jirka. Sidoo kale, Millet peptide wuxuu si weyn u wanaajin karaa shaqada faagocytic-ka ee macrophages-ka jiirka iyo taranka beerka, taas oo muujineysa in masaaxa peptide uu horumarin karo difaaca jirka iyadoo loo marayo difaac aan qaas ahayn.
Budada oligopeptide budada ah waxay leedahay firfircooni antioxidant xoog leh
Qiyaasta miisaanka loo yaqaan 'masago oligopeptide' ee xagjirka xorta ah ee 'DPPH' wuxuu ahaa 68.93%, taas oo yareyn karta hemolysis-ka unugyada dhiigga cas waxayna yareyn kartaa soosaarida MDA ee beerka, taas oo muujisay in masaaxa peptide uu leeyahay howl adag oo antioxidant ah.
 Saamaynta tallaalka-habka-beddelka ah ee peptides-ka loo yaqaan 'maste peptides' ee jiirka
 Diyaarinta Mashiinka Peptide iyo Waxqabadka Antioxidant-ka.